April, 2019 | Otu Di na Nwunye
April 26, 2019 + Europe, Greece, Nhazi njem
Otu esi emefu ugbua ogologo oge na Santorini
Ị na-agafe na ngwụsị izu na ugwu ugwu nke dị na Santorini? N'ebe a, ị ga-ahụ ụfọdụ ebe kachasị mma ịga leta na ihe omume ị ga-eme n'oge nleta gị. Mgbe ị na-atụgharị ihe niile n'ime izu ụka nwere ike ọ gaghị ekwe omume, ịnwere ike ịhọrọ nhọrọ niile na-adọta gị. N'agbanyeghị ebe ị nọ na Santorini, ... GỤKWUO
April 22, 2019 + Europe, Itineraries, Spain, Nhazi njem
Otu esi emefu izu uka na Barcelona
Barcelona, ​​bụ otu n'ime obodo ndị kasị ewu ewu ma dị ndụ na Europe. Ya mere, ihe a ga-eme ebe a? N'ụzọ doro anya, ihe niile! Ma nke ahụ bụ ihe oge, ma ọ bụrụ na i nwere nanị izu ụka ka ọ bụrụ nke ọ bụla, ọ dịghị mkpa ichegbu onwe gị. Enweta obodo Barcelona nwere ike ime na ngwụcha izu na-enweghị nnukwu ihe na-efu ma ka nwere oge dị egwu. Ebe anyị bụ ... GỤKWUO
April 18, 2019 + culinary, Europe, Nri na ihe ọṅụṅụ, Ozi ndị a, Romania, Romanian
Nri & Nri Ị Gbalị Gbalịa Mgbe Romania
Nri na nri Ị ga-agbalị mgbe Marius Iliescu dere - na onye nkwado nke enyi ndị Rom - otu ime obodo na-akwalite njem nlegharị anya na ndị nduzi kachasị mma na ndị njem nwere ike ịchọpụta ezigbo ịma mma nke Romania ma na-akwado ọrụ njem nleta. Mee njem gị na enyemaka site n'aka enyi ndị Rom ma soro anyị na Facebook ma ọ bụ Instagram iji hụ ihe ... GỤKWUO
April 7, 2019 + Arts & Music, Europe, Italy, Uncategorized
Borghese osisi: The Masterpieces Of Bernini And Caravaggio
Villa Borghese (Borghese Gallery Rome) nke oge a ka e kere iji nweta ọnụ ọgụgụ bara uru nke Cardinal Shipyon Borghese (Scipio Borghese), bụ onye nwere mmasị n'ịchịkọta ọrụ nkà. A mara ya dị ka onye na-achịkọta ya. Ozugbo ị zubere njem gị na Rom ma chọta ebe ị ga-anọ, ebe a ma ama ya bụ otu n'ime ebe ndị mbụ kwesịrị ... GỤKWUO
April 3, 2019 + Europe, Nri na ihe ọṅụṅụ, Italian, Italy, Isi akwukwo, Ezi ntụziaka
Esi mee Spaghetti alla Carbonara
Carbonara bụ eleghị anya na efere Ịtali kacha amasị m, ọ bụ n'etiti otu n'ime Tracy's. Ọ bụ creamy, ọgaranya, na ihe ijuanya dị mfe na oge nke oge eji na prep, ihe ndị metụtara, na usoro nri. A kụziiri anyị otú e si edozi nri a nke onye na-edozi na Milanese, ya mere, anyị nwere ike ịgwa gị ụzọ ọ ga - esi mee ya, na ihe dị mkpa, otu esi ... GỤKWUO